Store huges nke songs na listi ọkpụkpọ na iTunes Ọbá akwụkwọ na chọrọ nyefee gị iPhone? Ọ bụghị a nnukwu ihe. Ị pụrụ ime ya onwe gị. Isiokwu a gosiri unu abụọ mfe ụzọ nyefee listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPhone. Otu bụ iji iTunes, ndị ọzọ bụ ịgakwuru onye-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka.
Part 1. Iji iTunes nyefee listi ọkpụkpọ iji iPhone
Part 2. Iji TunesGo nyefee listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPhone
ngwọta 1-- maka iTunes 11
Dị ka ọ bụ niile mara na, iTunes ike ịnyefe listi ọkpụkpọ gị iPhone site mmekọrịta. Na-arụ ọrụ dị mfe. Ị pụrụ ịgbaso mfe nkuzi n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. Mgbe gị iPhone ẹwụtde ke n'aka ekpe n'akụkụ nke iTunes window, pịa gị iPhone na-egosi ya management window ke ziri ezi.
Nzọụkwụ 3. Click Music taabụ ma nne Mmetụta mmekọrịta Music. A dialog ga-ahụ gbapụta na-agwa gị ma ị na-amasị wepụ ugbu a ọdịyo na video faịlụ gị iPhone na mmekọrịta onye si iTunes. Pịa Wepụ na mmekọrịta.
Nzọụkwụ 4. Mgbe ahụ, tinye akara listi ọkpụkpọ na ị chọrọ ka mmekọrịta. Malite mmekọrịta site na ịpị Mee na ala-nri akuku.
ngwọta 2-- maka iTunes 12
Pịa "Music" na-ekpe ebi ndụ.
Tinye akà rà na "mmekọrịta Music" ego-igbe.
Lelee listi ọkpụkpọ na ị chọrọ ka mmekọrịta.
Họrọ "mmekọrịta" na gị playlist kwesịrị mmekọrịta.
ngwọta 3-- maka iTunes 12
họrọ "mmekọrịta Music" ego-igbe n'okpuru ngwaọrụ icon> "Music".
Pịa music dee akara ngosi dị na elu-ekpe òkè nke ihuenyo.
Lelee playlist (s) na ị chọrọ ka mmekọrịta, mgbe ahụ, ịdọrọ ha ngwaọrụ gị depụtara na "Devices" ngalaba na ekpe ebi ndụ. Ha ga-ahụ mmekọrịta ngwaọrụ gị.
Nyefee niile ma ọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPhone
Na-ẹdude ọdịyo na video mgbe playlist nyefe. Ọ dịghị data ọnwụ.
Ọ bụghị naanị na nyefee listi ọkpụkpọ, ma detuo music Ama, dị ka Fim, skips, igwu egwu adabere na ndị ọzọ.
Idozi music Ama mgbe songs Ama na-efu.
Nkwado iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5C, 5S, 5, 4S, 4, 3GS nke na-agba ọsọ na iOS 9, iOS 8, iOS 7, iOS 6, na iOS 5;
Nzọụkwụ 1 Jikọọ iPhone na kọmputa
Mbụ, wụnye na-agba ọsọ TunesGo na kọmputa gị. Jiri eriri USB na-abịa na iPhone ijikọ iPhone ka gị na kọmputa. Ozugbo ọ ejikọrọ, TunesGo ga-ntabi ịchọpụta gị iPhone. Ị ga-ahụ na-enwe ike na-ele ọdịnaya na gị iPhone egosipụta na n'aka ekpe n'akụkụ ndekọ osisi nke isi window.
Cheta na: Tupu imalite iji TunesGo, biko hụ na ị na-na na arụnyere iTunes na kọmputa gị. TunesGo ga na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na iTunes e arụnyere.
Nzọụkwụ 2 Copy playlist si iTunes ka iPhone
Pịa Playlist na ekpe-n'akụkụ aka ndekọ osisi. Pịa obere abịazi nọdụ triangle n'okpuru Add - akpa button na n'elu akara w hen na playlist management windo na-egosi na nri.
Mgbe ndọpụta ndepụta emepe, họrọ Tinye iTunes Playlist. Nke a ga-eme ka elu a obere window. Site ndabara, niile iTunes listi ọkpụkpọ na-enyocha. Ị nwere ike iwepu akọrọ bụrụ na ị chọrọ iji họrọ listi ọkpụkpọ aka. Mgbe ahụ, pịa OK. Nke a ga-ebute iTunes ka iPhone na-amalite nyefe gị iTunes playlist gị iPhone. N'oge nyefe, jide n'aka na ị na-gị iPhone ejikọrọ na gị PC.
Nyefee iPhone Photo Library ka Computer
A Full Guide nyefee iPhone ka Android
Nyefee ihe niile si iPhone ka iPad
Nyefee Photos si iPhone ka PC
Nyefee Music si Mac ka iPhone
Nyefee Data si iPhone ka iPhone
Nyefee Music si iPad ka iPhone
Nyefee Photos site na kọmputa na-iPhone
Export iPhone Igwefoto Roll ka Computer
Nyefee ozi site na iPhone ka Computer
Nyefee faịlụ site PC ka iPhone
Nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes
8 Common iPhone Headphone Nsogbu na Solutions
> Resource> iPhone> 2 Ụzọ Nyefee Playlist si iTunes ka iPhone